100million – Cele News TV
May 18, 2022 100million 0
သူမရဲ့ဒူဘိုင်းကအပန်းဖြေပုံရိပ်တွေကို သတိရနေတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ချပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး… ပရိသတ်ကြီးရေ beauty blogger တစ်ယောက်အဖြစ်အောင်မြင်မှု့တွေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပဲ ဖစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေမှာ အဓိကဇာတ်ကောင် မင်းသမီးအဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..။ နိုင်ငံရေးမှာအပေါ်ယံသာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့အပြုအမူတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှု့များစွာခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ဒီနေ့မှာတော့ နေခြည်ဦးကဒူဘိုင်းမှာအပန်းဖြေနေတဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို သူမကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ချပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ခြည်ခြည်နဲ့အလှပုံရိပ်တွေကိုမျှဝေလိုက်ရပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစလေို့ […]
ခက်ခဲတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာတောင် ပိုက်ဆံတွေ ကြိုးစားရှာဖွေပြီး အိမ်သစ်လေးတစ်လုံးရအောင် ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် The post ခက်ခဲတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာတောင် ပိုက်ဆံတွေ ကြိုးစားရှာဖွေပြီး အိမ်သစ်လေးတစ်လုံးရအောင် ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
စားသောက်ရေးမပြေလည်တဲ့ သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး စားချင်သလောက်စား သက်သက်လွတ် ဘူဖေးထမင်းဆိုင်လေး ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ မေပန်းချီ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီကတော့ လူတွေအပေါ်မှာ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပြီး နှလုံးသားလှတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူမရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အခက်ခဲတွေကို သူများတွေ မကြုံရစေဖို့အတွက် ကြိုးစားပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အာဟာရ ဒါန […]
May 17, 2022 100million 0
Myanmar Idolပြိုင်ပွဲကနေ winnerဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တာကတော့ အဆိုတော်ဖြိုးမြတ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်အားပေးမှုအများဆုံးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူကြီးလူငယ်မရွေးအားပေးခဲ့ကြတာပါ။ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလည်းယနေ့တိုင်အားပေးမှုတွေရှိနေတာပါ။ သူ့ဘဝရဲ့တစ်ကိုယ်တော်အခွေလေးကိုလည်းထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာတွေကိုကြိုးစားနေတာပါ။ သူဟာရိုးသားမှုတွေကြောင့်လည်းခုလိုအောင်မြင်နေရာရလာတာပါ။ အခုမှာလည်းသူရဲ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးကိုပြလိုက်တာပါ။ အကောင်းဆုံးနားခိုဖို့အတွက်ဆိုပြီး သူအိမ်လေးကိုသေချာတည်ဆောက်ထားတာပါ။ ပရိသတ်တွေလည်းအိမ်ကြီးဘယ်လောက်ခန်းနားလဲဆိုတာကတော့အောက်ကပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပေးကြပါဦးနော်။ Myanmar Idolပြိုင်ပွဲကနေ winnerဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တာကတော့ အဆိုတော်ဖြိုးမြတ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်အားပေးမှုအများဆုံးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူကြီးလူငယ်မရွေးအားပေးခဲ့ကြတာပါ။ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလည်းယနေ့တိုင်အားပေးမှုတွေရှိနေတာပါ။ သူ့ဘဝရဲ့တစ်ကိုယ်တော်အခွေလေးကိုလည်းထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာတွေကိုကြိုးစားနေတာပါ။ […]
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော သရုပျဆောငျမငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ပရဟိတအလုပျတှကေို ကိုယျကြိုးစှနျ့ပွီး ကိုယျရောစိတျပါ တကျကွှစှာ လုပျကိုငျနတောကွောငျ့ သူမရဲ့ စိတျဓာတျလေးကို ပရိသတျတှကေခြီးကြူးနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ စှနျ့ပဈခံရတဲ့ ကလေးငယျလေးတှကေိုလညျး သားသမီးအရငျးသဖှယျ မတ်ေတာအပွညျ့နဲ့ ချေါယူမှေးစားစောငျ့ရှောကျနခေဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သူမအားတဲ့ […]
တစ်ချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပရိသတ်အားပေးမှုတွေနဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ သရုပ်ဆောင်နေတိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်လူရွယ်မရွေး ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေပါအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းအအောင်မြင်ဆုံးအဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။ ဒါမယ့်နိုင်ငံရေးအခြေနေတွေမတည်ငြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုဝေဖန်သူတွေများလာခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်းအားပေးသူပရိသတ်တွေသိသိသာသာကိုကျဆင်းခဲ့တာပါ။ မကြာသေးခင်ကလည်း သူချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ရ​က်မှာလူပြောများခဲ့တာပါ။ သူဟာပရိသတ်ရှေ့ကနေအချိန်တော်ကြာပျောက်သွားခဲ့တာပါ။ ခုမှာတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ ဒီနေ့ပြုလုပ်သောဒါနကုသိုလ်အမျှပေးဝေပါသည်ဆိုပြီးတစ်သောင်းတန်အုပ်လိုက်ပုံလေးတင်ထားတာပါ။ ချစ်နေသေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းသူ့ရဲ့အလှူလေးကိုသာဓုခေါ်နိုင်ကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ တဈခြိနျကမွနျမာနိုငျငံမှာပရိသတျအားပေးမှုတှနေဲ့ထိပျတနျးမငျးသားတဈယောကျဖွဈခဲ့တာကတော့ သရုပျဆောငျနတေိုး တစ်ချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပရိသတ်အားပေးမှုတွေနဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ သရုပ်ဆောင်နေတိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်လူရွယ်မရွေး ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေပါအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းအအောင်မြင်ဆုံးအဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။ ဒါမယ့်နိုင်ငံရေးအခြေနေတွေမတည်ငြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုဝေဖန်သူတွေများလာခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်းအားပေးသူပရိသတ်တွေသိသိသာသာကိုကျဆင်းခဲ့တာပါ။ မကြာသေးခင်ကလည်း […]
တစ်မူထူးခြားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှပိုင်ရှင် ပိုင်ဖြိုးသုအကြောင်း…
တစ်မူထူးခြားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှပိုင်ရှင် ပိုင်ဖြိုးသုအကြောင်း… The post တစ်မူထူးခြားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှပိုင်ရှင် ပိုင်ဖြိုးသုအကြောင်း… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ပြောကျခကျြသားကောငျးနပေမေဲ့ ဒူဘိုငျးမှာအ ပနျးဖွေ ခရီးထှကျနတေဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှကေိုခပြွလာတဲ့ Beauty blogger နခွေညျဦး
တဈနိုငျငံလုံးက မိနျးကလေး ပရိသတျတှေ မခဈြပဲမနနေိုငျတဲ့ နခွေညျဦး ကတော့ Beauty Blogger တဈယောကျ အဖွဈကနေ နိုငျငံကြျော မငျးသမီးတဈယောကျအဖွဈ အနုပညာ လမျးကွောငျးပျေါကို ရောကျရှိခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိပိုငျဆိုငျလာတဲ့ နခွေညျဦး ကတော့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေိုလညျး လုပျကိုငျနသေလို သူမခဈြတဲ့သူတှကေိုလညျး […]
ခဈြသူငယျခငျြးယမငျး ကို ကို နဲ့ ခငျ မငျ မူအမှတျတ ရ လေး တှကေို ပွနျလညျ ပွော ပွ လာတဲ့ လှမြိုးသငျဇာနှယျ
ခဈြသူငယျခငျြးလေး ယမငျးကိုကိုနဲ့ ခငျမငျမူအမှတျတရလေးတှကေို ပွနျလညျပွောပွလာတဲ့ သရုပျဆောငျလှမြိုးသငျဇာနှယျ သရုပျဆောငျလှမြိုးသငျဇာနှယျကတော့ပွငျလှတဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှအေတူနဲ့ကရြာဇာတျကောငျတှမှောအကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ပရိတျသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကိုအခိုငျအမာရရှိထားပါတယျနျော။ အခုတဈခါမှာဆိုရငျ သရုပျဆောငျလှမြိုးသငျဇာနှယျကခဈြသူငယျခငျြးလေးယမငျးကိုကိုနဲ့ခငျမငျမူအမှတျတရလေးတှကေိုအခုလိုပွနျလညျပွောပွလာခဲ့ပါတယျနျော။ သရုပျဆောငျလှမြိုးသငျဇာနှယျကခဈြတယျ ယမငျး ( ယမငျးကိုကို )၊နှဈပေါငျး နှဈဆယျလောကျ ခငျမငျမှု့ သံယောဇဉျ ကို တနျဖိုးထားပါ့မယျ ဆိုပွီးရေးသားဖျောပွထားပါတယျ၊စာဖတျပရိတျသတျကွီးမြားအတှကျပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ Zawgyi Vision ချစ်သူငယ်ချင်းလေး ယမင်းကိုကိုနဲ့ ခင်မင်မူအမှတ်တရလေးတွေကို ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ […]
ကိုယျခငျြးစားတရားလေး အပွညျ့အဝထား နိုငျတဲ့ အဆိုတျောဖွူဖွူကြျောသိနျးရဲ့ စိတျထားလေး
အဆိုတျောပိုပိုကို အားနာလို့ ဘယျမကျြနှာနဲ့ အနုပညာတှပွေနျလုပျရမှနျးမသိဘူးဆိုပွီး ရငျဖှငျ့လာတဲ့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး ပရိတျသတျကွီးရေ၊အခုတဈခါမှာဆိုရငျတော့အဆိုတျောဖွူဖွူကြျောသိနျးကအဆိုတျောပိုပိုကို အားနာလို့ ဘယျမကျြနှာနဲ့ အနုပညာတှပွေနျလုပျရမှနျးမသိဘူးဆိုပွီးအခုလိုရငျဖှငျ့လာခဲ့ပါတယျနျော။ အဆိုတျောဖွူဖွူကြျောသိနျးကBlessed Birthday ပိုပို၊သီခငျြးတှပွေနျဆိုဖို့၊ သီခငျြးသဈတှထေုတျဖို့၊ ပှဲတှဆေိုဖို့၊ ပှဲတှတေကျဖို့၊ ကွျောငွာတှရေိုကျဖို့၊ ဓာတျပုံတှရေိုကျဖို့ လာပွောကွတိုငျး သူ့မကျြနှာလေးပဲ ပွေးမွငျတယျ။ ကိုယျတောငျ အပွငျမှာ ၆ လကြျော […]